Onye nrụpụta kacha arụ ọrụ na ụlọ nrụpụta | Toonney
Ngwa na mpaghara anwụ anwụ oyi bụ otu n'ime ngwa kachasị nke ngwa carbide tungsten. Enwere ike kewaa isi ọnwụ ịnwụ anwụ na ịkpa nkụ, ejiri ya na isi oyi, isi ọkụ, na ọnọdụ teknụzụ isi ọkụ. Osisi metal Toonney na-eguzogide na-emetụta metal na-eguzogide corrosion nwere ezigbo nguzogide. Osisi ọla na-eguzogide corrosion Toonney bụ onye ama ama maka isi oyi na-anwụ anwụ na iji ọnụ ahịa ụlọ ọrụ na-egbu ya. Kedu ihe kpatara osisi osisi na -eguzogide corrosion nwere ike iji nye ndị ahịa ọnụ ala? N'ihi na osisi toonney na -eguzogide nchara na -enweta ọtụtụ nkwado site n'aka ndị ahịa gara aga na gọọmentị ime obodo. Nabata na osisi osisi na -eguzogide corrosion Toonney maka ozi ndị ọzọ gbasara ịnwụ stampụ na isi oyi anwụ.
Okwu mmalite nke isi onwu
Isi oyi bụ teknụzụ usoro nke na -eme mgbanwe ọrụ na ụdị dị nso na ngwaahịa emechara ruo na oke n'ime usoro ole na ole. Ọ bụ ntọala nke igwe igwe na ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ. Ụlọ ọrụ Toonney oyi nwụrụ ụlọ ọrụ na -emepụta isi okwu dị iche iche gụnyere ịnwụ anwụ, isi oyi nwụrụ, nkenke nwụrụ, carbide nwụrụ, stamping anwụ na ịgha ụgha nwụrụ anwụ. Ekele dịrị gọọmentị na -akwado ndị uwe ojii, ụlọ ọrụ Toonney oyi na -anwụ anwụ nwere ike ịnye isi mkpuchi oyi dị ọnụ ala n'ezie na ịnwụ.
Toonney stamping die emeputa enwetala ewu ewu karịa n'ụlọ na mba ofesi. N'ihi na Toonney stamping die emeputa nwere ahụmịhe bara ụba nke ịmịpụta stampụ. Ndị na -emepụta Toonney stamping die manufacturer bụ ndị otu ọkachamara nwere ọkwa mba ofesi. Dị ka onye nrụpụta stamping mpaghara ama ama, Toonney stamping die emeputa na -enweta nkwado ụfọdụ site n'aka gọọmentị. Yabụ na onye nrụpụta stampụ anwụ anwụ Toonney nwekwara ike ịnye ezigbo ọnụahịa.
N'okpuru mmetụta siri ike na -eyi ọnọdụ ọrụ, tungsten carbide oyi isi nwụrụ anwụ chọrọ ka alloy nwere mmetụta mmetụta siri ike, mgbaji mgbawa, ike ọgwụgwụ, ike mgbanwe, na ezigbo nguzogide.
1. A na-ejikarị ya eme ihe n'ọkwa cobalt dị elu na akara ule alloy na-adịghị ike.
2. Nguzogide na -eyi carbide, mmekọrịta siri ike n'etiti ha abụọ na -emegiderịta onwe ha: iji meziwanye mgbochi eyi ga -eduga na mbelata ike, ma melite ike na ịdị na -eguzogide na -eduga mbelata. Ya mere, nhọrọ nke akara ule alloy, mkpa ịrụ ọrụ dabere na ihe na ọnọdụ ọnọdụ iji zute ihe achọrọ.
3. Ọ bụrụ na akara ule ahọpụtara, nke nwere ike ịgbawa ma mebie n'oge, kwesịrị iji ọkwa ike siri ike karịa; ọ bụrụ na ọkwa ahọpụtara ka eji eme ihe n'oge na -emebi emebi na mbibi, kwesịrị iji ike siri ike, na -eyi nguzogide na akara ule ka mma. Toonney nwere akara ule dị n'okpuru maka stampụ nhọrọ ịnwụ.
Ọkwa Njupụta Ekweghị ekwe MGBE Mmetụta ike mmetụta
NRST7 13.4 85 2640 0.8
Ihe nlele dị mkpa:Igwe oyi na -anwụ na ịnwụ stampụ nke nwere ike ịdị site na ngwa ahịa anyị na -emekarị, enwere ike ịnye ya dị ka ihe nlele n'efu. Maka ụfọdụ ihu oyi na -anwụ na stampụ ịnwụ na onye ahịa pụrụ iche chọrọ, a ga -akwụ ya ụgwọ. N'ezie, ndị ahịa kwesịrị ịkwụ ụgwọ mbupu. Ọtụtụ mgbe, oge nlele nke ihe nlele ga -adị n'ime ụbọchị ọrụ 7
Onu ogugu kacha nta:Enweghi ọnụọgụ ọnụọgụ kacha nta nke ịnwụ isi na ịnwụ maka usoro ikpe izizi. Mana n'usoro nke abụọ, ngụkọta ego oyi na -atụ ịnwụ ma ọ bụ ịnwụ anwụ ekwesịghị ịbụ ihe na -erughị 1000 USD.
Nkọwapụta nke ịnwụ anwụ
Ọkwa Njupụta Ekweghị ekwe Ekweghị ekwe MGBE Ike mkpakọ KIC
RK2 14.93 90.2 1586 3200 4.1 17
RK4 14.31 89.2 1431 3400 3.9 19
RK6 14.12 87.2 1177 3200 3.7 22
NRST6 13.70 85.8 972 2740 3.5 23
NRST7 13.40 84.8 886 2640 3.3 24
Toonney oyi isi ụlọ ọrụ na -anwụ anwụ nwekwara ike ịnabata ngwaahịa tungsten ahaziri.
Njirimara nke isi ọnwụ
Product aha: Isi oyi na -anwụ/stamping anwụ
Nọmba nlereanya: CHD/SD
Ụdị: Isi oyi na -anwụ/stamping anwụ
Ọkwa: GA10 ， RKG2, RKG3, RKG4, RKG5, RKG6, RVA70, RVA65, RVA80, RVA90, RVA95, RST6, RST7, RST8, GW70, KC12, KC13, KC18, A40, GA50, GA55, GA60
Usoro ịkwụ ụgwọ: FOB Xiamen, TT
Ngwa nke isi ọnwụ
GA10, RKG2, RKG3, RKG4 (njupụta na ike dị ka okpokoro dị n'elu gosiri)
Kwesịrị ekwesị maka isi nwụrụ dị ka ịbịaru Bube die, ịkpụ ntụ ntụ, nut na bolt die
RVA70 (yana njupụta 14.02, njikota 85HRA) etinyere ya maka ịbịaru nkedo siri ike maka ịghasa na mkpụrụ.
RVA65 (yana njupụta 13.73, ike 85HRA) bụ maka obere dia. bolt anwụ, isi oyi anwụọ
RVA80 (yana njupụta 13.58, hardness 84HRA) bụ maka nnukwu dia. bolt die, nut die, oyi aga anwụ
RVA90 (yana njupụta 13.39, ike 82.5HRA) bụ maka ịkpụzi akpụzi isi, mkpụrụ na-anwụ, mgbali mgbali elu dị elu.
RVA95 (yana njupụta 13.10, hardness 81.5HRA) bụ maka anwụ anwụ, ịghasa yiri okooko osisi, anwụ anwụ na-ekpo ọkụ, ịnwụ anwụ dị oke egwu.
RST6 (yana njupụta 13.70, ike 85.8HRA) etinyere na igwe anaghị agba nchara nwụrụ.
RST7 (yana njupụta 13.40, ike 85HRA) etinyere na igwe anaghị agba nchara, mmetụta stamping na -eguzogide na -anwụ, na -anwụ anwụ.
RST8 (na njupụta 13.30, hardness 84HRA) etinyere na ịghasa isi ihe nkedo nwụrụ, mmetụta stamping na -eguzogide na -anwụ anwụ, mpi ụdị udi okpukpu abụọ na -anwụ, ịghasa anwụ, rivet anwụ.
KC18 (yana njupụta 13.73, ike 83.5HRA) etinyere na ịpị stampụ anwụ
Biko kpọtụrụ ahịa maka ajụjụ ọ bụla n'ịhọrọ akara ule.
Uru nke Ịga Ọnwụ
Toonney stamping nwụrụ ụlọ ọrụ na -ejikwa ogo ahụ nke ọma, nwee ngwaọrụ nyocha dị ka HV, onye na -enyocha HRA, onye na -enyocha TRS, onye na -enyocha sọlfọ carbon na microscope dị elu iji nwalee njirimara anụ ahụ na kemịkal nke ihe carbide tungsten. Na kpọmkwem akụkụ akụkụ ịchịkwa ọdịdị ndidi.
Toonney stamping die emeputa nwere ihe karịrị afọ iri nke ahụmịhe mmepụta stamping ịnwụ na isi oyi na -anwụ.
Toonney na -ebubata akụrụngwa dị elu wee zụlite ndị otu ọkachamara nke ha maka ịchepụta na imepụta isi anwụ anwụ na stamping ọnwụ.
Toonney isi ọkụ nwụrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe nwere ike inye nkwa na ọnwụ stampụ na isi nkụ oyi ga -enyocha n'oge a na -emepụta ya na nyocha ikpeazụ mgbe emepụtachara ya.
Toonney stamping nwụrụ onye na -emepụta ihe nwere ike ịnabata usoro ahaziri stampụ anwụ na isi oyi anwụ.
Nke gara aga: Ịbịaru Die